म प्रलय चाहन्छु | शहरबाट शब्दहरु
« नखोसियोस् उज्यालो खुशी
नागरिक जल्दा… भाग १ »
यतिखेर संसार ध्वस्तको समाचार कल्पना गर्दे वास्तविक शब्दहरु दौडाईरहँदा मेरो अनुहारमा िसंगो काठमाडौको दृश्य समाएको छ । शब्दहरु शुरु गर्ने कठिनाई भईरहेको छ । यतिखेर मन र मतिष्कपनि असमान स्थितीमा छन् । मन हिजैबाट टुकि्रएको छ । आफ्नै मान्छेले जब दुई शब्दमा संसार ध्वस्त हुन्छ भन्ने कुरा उठायो । आफुलाई सम्हाल्दै वास्तविकता बुझाउन उनीलाई भगवानको लीला सम्झाउन प्रयत्न गरे । संसारमा व्यक्ति बिशेषले चाहेर यस्ता कुरा हुदैनन् ।
श्रूष्टिका साचालक मान्छे होईनन् । दोहोरो सम्बादमा उत्पन्न डरले होला । सम्वादमा आएका शब्दहरु चिसा भईरहेका थिए । एक कान दुई कान मैदान । हटन्युजले ठाउँ पायो । कतिले यसलाई हावा गफ मानेपनि त्रासमय मुटुमा सन्तोष बिसाउन सकिरहेको थिएन । किन डराउने भनेर अरुलाई सम्झाउने भाको आफु रातभर सुत्न सकिएन । आखिर डराउनुपनि किन सबैलाई एकदिन जानु नै छ । को रहन्छ र यहाँ न म न तिमी र न तपाँई ।
रातभर म वृतचित्र बनिरहे । आफैले खिचे र आफैले सम्पादन गर्दे हेरिरहे ।
त्यहाँबाट केहीपर मात्र मेरो परिवारको पीडा म भित्र सलबलाएको छ । आखिर यथार्थ हो वा हावा गफ बुझ्न असहजता छदैथियो । मनमा बाँकी समय गन्ती गर्दे नचाँहिदो बाजा बजिरहेको छ । साधारण मनुष्य बनेको मलाई यति सुक्ष्म त्रास छ भने काठमाडौबासीले के गरे होलान् । शायद पहिलाकै जस्तै अनिदो रात कटाएका होलान् । हिजैबाट मनभित्र काँडा जस्तै त्रासका गहिरो कुरा लेख्न म उतेजक बनेको थिए । समाचार प्रति मेरो झुकाव छ । र यसलाई म असत्य मानिरहेको छु । तर कतिपय त्यस्ता उदाहरण पनि छन् । नास्त्रेदमस त्यस्को मुख्य प्रमाण हो । जसले बोलेको भविष्यवाणी कसैले सुनेनन् । विश्वास गरेनन् । तर संसारमा आएको प्रलयपश्चात् नास्त्रेदमस्को मुटुमा एक लिखित लेख पाईयो । त्यसमा जुन परिस्थिती र त्रास समकालीन भोग्दै थियो । त्यसको ’bout निकै वर्ष पहिलै नास्त्रेदमस्ले भविष्यवाणी गरिसकेका थिए । तर हाम्रो देशमा यस्तो प्रवृतिका कुशल व्यक्तित्वहरु छैनन् । केवल छ त धार्मिकतामा अल्झिएकाहरु र त्यसमा बाँधिएकाहरु । यहाँनिर मलाई के पनि लाग्दैछ भने मान्छेहरुलाई धर्म प्रति खिच्नु हो की जस्तो । दुखमा सबैले भगवानलाई याद गर्छन् तर सुखमा कसले त्यही भएकोले त्यो बेला काँडामा कुल्चिनुपर्छ की भगवानको ध्यान कतै नजाओस् । यसर्थ धर्म जरुरी छ मान्छेको जीवनमा । यसले मान्छेलाई एकप्रकारको शक्ति दिन्छ ।
यतिखेर संसारका सबैले अर्थात जो समाचारबाट प्रभावित छन् । यही शक्तिलाई प्रयोग गर्देछन् । यही क्षणमा लोभ मोह कोध्र अहंकार र अभिमान कुल्चेर भगवानको नाम उच्चारणमा व्यस्त छन् होला । यो कुराबाट कतिलाई लाग्न सक्छ की यो पंक्तिकार देशमा प्रलय चाहदो रहेछ । हो म प्रलय चाहन्छु तर देश र जनतामा होईन् । मान्छेका मन भित्र रहेका अहंकार रिस ईख अभिमान र कोध्रको । जसको प्रलय पश्चात् सन्तुष्ट जीवनमा मान्छेहरु बाँच्नेछन् । अनि देशमा शान्तिपनि कसो आऊला काठमाडौ ध्वस्त हुने समाचार टिभीबाट दिईएको रहेछ । सत्य असत्यका लागि समय प्रतिक्षा नगरि हुन्न । तर मौखिक बोलिएका यी भविष्यवाणीहरु सम्भव छन् हुन्न भन्नेमा म शतप्रतिशत ढुक्क छु । किनकी नाष्तिकपन नरहेको मेरो आत्माले पल पल बोल्छ । जे हुन्छ माथिबाट चाहेपछि मात्र हुन्छ । वहाँको मर्जी बिना केही सम्भव छैन । आखिर ढिलो चाँडो संसार एकपटक सकिनु पनि त छ । अनि सृष्टिका पात्रहरु पाचतत्वमा मिल्नु पनि छ एकदिन । आखिर हामीहरुलाई खाने माटोले नै हो ।
मर्न देखि डराउनेले बाँच्न जानेको हुदैन । सबैबाट मुखरित भएको एउटै जीवनमा राम्र्रै काम गर्न सके के नै घाटा पर्छ र यतिखेर शब्दका लहरमा एउटा दृश्य आएको छ । योगगुरु विकासानन्दको । उहाँले कहि कतै भन्नुभएको छ र लेख्नुभएको छ । जुन मेरो आत्मामा बसेको छ । संसार बदल्नुछ भने शुरु आफैबाट गर्नुपर्छ । यो शब्द सहज छ । यसको प्रयोग अत्यन्तै गाहो । यद्धपी प्रयासरत त बन्न सक्छौ । हामी किन अहिले र आजैबाट यसलाई नथाल्ने होईन हामी के कुर्दैछौ लेखिने कुराहरु निकै छन् । यसमा केही शब्दहरु कोही पाठक वा कसैलाई ठेस पर्ने गएमा आत्माबाट क्षमाप्रार्थी माग्दै भजन गायक अनुप जलोटाका शब्दका लहरहरु मर्ने डराएका सबैलाई समर्पित गर्दे बिदा ।
तेरे जैसै लाखौ आए ।
लाखौ ईस माटी ने खाए ।
राहाना नामोनिशान ऐ बन्दे
तेरे झूठे शान रे
मत कर तु अभिमान रे ।
Explore posts in the same categories: म र मेरो कुरा, मेरो लेख, मौनबस्तीको आवाज
This entry was posted on अप्रील 24, 2010 at 4:30 बिहान and is filed under म र मेरो कुरा, मेरो लेख, मौनबस्तीको आवाज. You can subscribe via RSS 2.0 feed to this post's comments.	You can comment below, or link to this permanent URL from your own site.
One Comment on “म प्रलय चाहन्छु”
Google Nepal Directory Says:
अप्रील 26, 2010 at 8:36 बिहान